शिक्षक आयोगको परीक्षा तयारी : केही टिप्स | EduKhabar
शिक्षक आयोगको परीक्षा तयारी : केही टिप्स
- परीक्षाको तयारी गरिरहँदा आफुले पढ्नै पर्ने कुरा के हो भन्ने जान्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । मेरो सम्पर्कमा रहेका प्राथमिक तथा निमाविका केही परीक्षार्थीले संविधानको भाग १ देखि नै पढिरहेका छन् । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०११ र २०१८ पनि पढ्दै गरेको पाएको छु । निमाविको तयारी गरिरहेकाहरुले सार्क र अन्य देशको संरचना, प्राविकाहरुले नासा प्रतिवेदन र केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरणको सामग्री खोजेको पाइएको छ । त्यसैले आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम अनुसार आफुले पढ्नुपर्ने विषयवस्तु के हो र कति हो भन्ने छुट्टाउनु ज्यादै महत्वपूर्ण र आवश्यक हुन्छ । प्रावि तहमा विभिन्न ५१ वटा, निमावि तहमा ७१ वटा र मावि तहमा ९१ वटा विभिन्न शीर्षकमा तयारी गर्नुपर्ने भएकाले विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ ।
- विषयवस्तुको आधारभूत ज्ञान नभई त्यस विषयको गहिराईमा गएर तयारी गर्नु जरुरी हुँदैन । अधिकांश परीक्षार्थीले नयाँ कुरा भेटना साथ त्यसलाई पढ्न हतार गर्ने तर त्यही भेटेर पढेको कुरालाई अर्को पटक द्धिविधामा नपर्ने गरी निश्चित गरेर पढ्ने गरेको पाइँदैन । कुनै पनि कुरा पढ्दै छौँ भने त्यसलाई एक पटक राम्रोसँग नबिर्सने गरी पढौँ, टिपौँ ताकि एउटै विषयवस्तुलाई पटक पटक उत्तीकै समय दिन नपरोस् ।
- कतिपय परीक्षार्थी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ र शिक्षा ऐन २०२८ भन्दा अलमलमा परेको पनि पाइन्छ । शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली फरक फरक हुन् भन्नेमा पनि द्धिविधा देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि कुरा पढ्दा आफूले के पढ्दैछु र त्यही कुरा अर्को कुनै विषयवस्तुसँग कसरी सम्बन्धित छ वा कसरी असम्बन्धित छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । शिक्षा ऐन २०२८ र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएको मिति र जिल्ला एउटै हो, तर शिक्षा ऐन कानुन हो र अहिले पनि छ, भने योजना लागू भयो र त्यस पछि शैक्षिक व्यवस्थामा थुप्रै परिवर्तन आए भनेर फरक के हो ? भन्ने छुट्टाउन सक्नु पर्छ ।
- पढ्ने विषवस्तुलाई यति हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रश्न सोध्नेले शीर्षक देखे पछि जताबाट सोध्न सक्छ तर त्यसो भनेर परीक्षाको तयारी गरिरहँदा सबैकुरा कण्ठ पार्न सकिदैन र संभव पनि हुँदैन । आयोगको पाठयक्रम र प्रश्नको ढाँचाले कण्ठ पार्ने ज्ञान खोजेको देखिन्छ । परीक्षार्थीले कण्ठ त पार्नै पर्ने छ तर थोरै समयमा अरु धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि १९९६ को इस्तिहार र २०२८ को संरचना एउटै छ भने एउटा मात्र संरचना पढ्ने र त्यसलाई कण्ठ पार्ने अनि दुईवटा एउटै हुन भनेर बुझ्ने । २०४९ को कक्षा १० सम्मको संरचना र २०२८ भन्दा अगाडिको संरचना एउटै हो भने त्यसलाई पनि एउटा मात्र पढ्ने र यो संरचना यता र यसरी मिल्छ भनेर विषयवस्तुको सम्बन्ध स्थापित गरिदिनुपर्छ । शिक्षाका राष्ट्रिय उद्धेश्य पढ्दै हुनुहुन्छ भने २०४९ का ७ वटा उद्धेश्य मध्ये पाँचवटा उद्धेश्य अहिले पनि मिल्छन् भने कुन कुन उद्धेश्य मिल्छन् भनेर हेर्नु पर्छ । यसरी हेर्दा अहिलेका १२ वटा पढेकै ज्ञानले २०४९ को पाँचवटा जान्न सकिन्छ ।
- माध्यमिक तहका परीक्षार्थीले २०११ देखि २०५८ सम्मका ६ वटा शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरु पढ्नुपर्छ । त्यसमा अध्यक्ष, सदस्य, गठन मिति र प्रतिवेदन बुझाएको मितिलाई तुलना गरेर पढ्ने हो भने ६ वटा प्रतिवेदन मध्ये एउटामा अध्यक्ष, सदस्य, गठन मिति केही छैन । बाँकी पाँचवटा आयोगहरु गठन भएका महिनाहरु जम्मा चारवटा छन् भने प्रतिवेदन बुझाएको मिति एउटाको फागुन र अरु सबैको असार छ । असार पनि १३, १४ र १५ गते मात्र छ । यति कुरा मात्र बुझ्ने हो भने परीक्षामा आउने प्रश्नबाट विकल्प छनौट गर्न कण्ठै गरेको हुनु पर्दैन ।
- बहुवैकल्पिक प्रश्नको विशेषता भनेकै सबै उत्तर मिल्दो र सबैभन्दा मिल्दो एउटा हो, त्यसैले बहुवैकल्पिक प्रश्नको तयारी प्रश्न पढेर होइन, विषयवस्तुबाट तयारी गर्नुपर्छ । प्रश्न पढ्दा सोही प्रश्न परीक्षामा आयो र विकल्प पनि पढेकै अनुसार आयो भने त मिलाउन सकिन्छ तर त्यस्तो संभावना कमै हुन्छ । प्रश्न त्यही आए पनि विकल्प फरक हुन्छन् । परीक्षाको प्रश्न बनाउनेले बनाउने विकल्प र कुनै पुस्तकका लागि बनाउने प्रश्नको विकल्प फरक हुन्छन् । विषयवस्तु राम्रोसँग पढेर केही प्रश्नहरुमा हरेक हप्ता वा तीन दिनको अन्तरालमा अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- इतिहास लगायतका कतिपय तथ्य तथ्याङक्हरुमा विभिन्न द्धिविधा र विरोधाभासहरु पनि पाइन्छ् । अहिले आएर सय वर्ष अगाडिको कुनै तथ्यलाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न त सकिदैन । यदि इतिहासका तथ्यहरुमै फरक छ भने कहिलेकाँही त्यसमा धेरै समय खेर नफालेर अगाडि बढ्ने हो । जुन कुराको अन्तिम तथ्य आउँदैन त्यसको पछि लाग्ने समयमा अन्य धेरै कुरा पढ्न सकिन्छ ।
- तथ्याङ्क पढ्न धेरै कठिन हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यो स्वभाविक पनि हो तर तथ्याङ्कलाई पनि एउटा कुनै निश्चित विन्दुमा बसरे पढियो भने त्यो सहज र एउटा कुनै निश्चित ठाउँमा पढेको तथ्याङ्कले अन्य धेरैतिर सहयोग गर्छ ।
- ऐन नियमावलीमा भएका विभिन्न संशोधनका मितिहरु भन्दा जारी मिति र पछिल्लो संशोधन महत्वपूर्ण हुन्छन् । बीचमा भएका सबै संशोधनका मितिहरु कण्ठ पार्नु भन्दा पहिला ऐन नियममा भएका व्यवस्थाहरु जान्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । मिति नै पढ्न मन लागे पनि त्यसलाई तीन चार कक्षाका विद्यार्थीले गुणन तालिका पढे जस्तो गरी कण्ठ नगरी कुन कुन वर्षमा संशोधन भएको छ ? कति औँ संशोधन कति वर्ष पछि भएको छ ? संशोधनका महिनाहरु कुन कुन रहेछन् भनेर मात्र पनि समिक्षा गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कण्ठै नपारे पनि सही उत्तर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
- शिक्षा ऐन नियमावलीका मुख्य प्रावधानलाई तालिका वा तुलनात्मक चार्ट बनाएर हेर्न सकिन्छ । ऐनमा भएको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र नियमावलीमा भएका अन्य सबै परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छन् भनेर पढ्न सकिन्छ । शिक्षा नियमावली अनुसार जिल्ला स्तरमा गठन हुने जम्मा चार वटा समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् भनेर छुट्टाउन सकिन्छ । सबै समितिका मनोनित सदस्यको पदावधि २ वर्ष, ३ वर्ष र ४ वर्ष छ तर धेरैको ३ वर्ष छ । यस्तो अवस्थामा ३ वर्ष हुने धेरै नपढी २ र ४ हुने कुन कुन हुन भनेर अलग गर्न सकिएला ।
- पाठ्यक्रम ढाँचा पढिरहँदा मुख्य विषय नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित विज्ञान कक्षा १ देखि १० सम्मै छ भने नेपाली र गणितको पाठ्यभार प्राथमिक तहको फरक छ भनेर पढ्दा पुग्छ । कक्षा ६ देखि ८ का विषयमा पूर्णाङ्क र पाठ्यभार पढ्दा फरक भएको नैतिक र स्वास्थ्य शारीरिकको फरक के हो भन्ने मात्र पढेर अरु सबै विषयको एउटै छ भन्न सकिन्छ । माध्यमिक तहमा पनि मुख्य विषयहरु अरु संस्कृतमा, धार्मिक शिक्षामा पनि एउटै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । अक्षराङ्कन पद्धतिमा ग्रेड प्वाइन्टमा ०.८ बाट शुरु भएर हरेकमा ०.४ का दरले बढ्दै जान्छ भनेर बुझ्ने हो भने धेरै पढ्नै पर्दैन ।
(आचार्य, शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा रहेका परीक्षार्थीलाई लक्षित गरी तीनै तहका वस्तुगत प्रश्न सेट र विषयवस्तु सहितको पुस्तक बौद्धिक मञ्चका लेखक पनि हुन् ।)